Duqeymo ka dhacay Muqdisho
5 Dec 5, 2012 - 6:35:42 AM
Madaafiic ku dhacday Degmooyinka Boondheere iyo Wardhiigley gaar ahaan xaafado ku dhow Villa Somalia ayaa waxay sababeen dhaawacyada 5-qof, kuwaasoo ahaa shacab ay madaafiicdu kula dhacday guryahooda.
Duqeyntan oo ay mas'uuliyadooda sheegatay Al-shabaab ayaa waxay sheegeen in ay ku weerareen Villa Somalia, iyadoo aanay jirin madaafiic ku dhacday gudaha xarunta madaxtooyada sida ay sheegeen Madaxda DF iyo ilo wareedyo kale oo ka madaxbanaan.
"Madaafiicdu waxay ku dhacday intooda badan degmada Boondheere, waxayna u geysatay dhaawacyo kala duwan dad shacab ah" ayuu yiri Gudoomiyaha Degmada Boondheere Cabdullaahi Istakiin oo saxaafada la halay.
Sidoo kale, gudoomiyaha wuxuu sheegay in duqeyntan ay geysteen Al-shabaab ayna socdaan baaritaano lagu raadinayo kooxihii geystay, ayna sharciga horkeeni doonaan maalmaha soo socda.
Kulan looga hadlayay Amaanka Muqdisho ayaa wuxuu isla maanta ka dhacay Villa Somalia kaasoo ay ka qaybgaleen Afhayeenka Baarlamaanka iyo Ra'iisu Wasaaraha, waxaana looga hadlay xoojinta Amaanka Muqdisho.
Magaalada Muqdisho oo Al-shabaab ay isaga baxday [Aug, 2011] ayaa waxaa weli ka dhaca falal amaandaro oo isugu jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay dad badan waxyeelo kasoo gaarto, iyadoo dowladuna ay awoodi wayday inay amaanka oo dhan gacanta ku dhigto.
Prof. Jawaari iyo Saacid Faarax ayaa labaduba sheegay inay amar ku bixiyeen in sharciga la horkeeno kuwii ka dambeeyay, iyagoo shacabka ka dalbaday inay ka geystaan gacan sidii loo adkeyn lahaa Amaanka Caasimada kuwa dambiyada geysanayana loosoo qaban lahaa.
Duqeyntan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo Madaxweynaha Somalia uu safar uga maqan yahay dalka, balse waxaa horay duqeymo caynkan oo kale ah oo khasaare geystay loogu weeraray Villa Somalia oo ah xarunta ay ku howgasho DF.